(SAWIRRO) Dallada PUNSAA oo furtay wadda-tashi ku saabsan isla xisaabtanka dowladda iyo shacabka. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Dallada PUNSAA oo furtay wadda-tashi ku saabsan isla xisaabtanka dowladda iyo shacabka.
(Pi Garowe) Dallada ururada bulshada aan dowiga ahayn ee PUNSAA, ayaa maanta magaalada Garowe ee caasimaddaPuntland ku daah furtay shir muhiim ah oo ku saabsan wadda-tashiga maamulka isla xisaabtanka dowladda iyo bulshada rayidka ah.
Agaasimaha dalladda PUNSA Bashiir Siciid Ismaaciil ayaa sheegay in kulan uu ku saabsanyahay isla xisaabtanka dowladda iyo bulshada rayidka ah, islamarkaana lagu gorfaynayyey arrimo la xiriira xisaabaadka, maadaama PUNSA ka shaqayso u qareemidda bulshada rayidka ah, wuxuuna tilmaamay in uu socon doono muddo saddex bari ah, iyadoo gunaanadka shirka laga soo saari doono warsaxafadeed lagu soo koobayo nuxurka ka soo baxa.
Agaasimuhu wuxuu ka hadlay doorashada PUNSA oo muddo labo bilood ah dib u dhacday, wuxuuna sheegay in asbuuca soo socda gudihiisa la qabandoono doorashadii PUNSAA, isagoo xusay in diyaar garowgii ugu dambeeyay ay ku jiraan sidii doorashadaasi u dhici lahayd.